PalSal Levi - I-Airbnb
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Olli
U-Olli Ungumbungazi ovelele
Konke okudingayo ukuze uthole iholide eliphumulele e-Levi. Eduze kwayo yonke into kodwa kusabekwe kahle kude nenkaba yedolobha endaweni ethule. Ekhaya kude nekhaya!
Indawo, indawo, indawo. I-Levi Centre (400 m) kanye nemithambeka yokushushuluza (amamitha angama-600) isendaweni ehamba ngezinyawo. Ungakwazi ukushaya izindlela zokushushuluza cishe ukusuka emnyango wangaphambili (100 m). Noma kunjalo indawo ifihliwe kuzo zonke izinxushunxushu e-Levi Centre. Kunezindawo zokupaka ezimbili ezinogesi kuleli fulethi okuwubukhazikhazi obuyivelakancane enkabeni yedolobha.
Le ndlu ka-2018 evuselelwe kabusha engamamitha-skwele angama-59 womugqa wendlu inikeza zonke izinto ezidingekayo ukuze kube neholide eliphumuzayo nelijabulisayo. Amakamelo okulala amathathu ahlukene ngesikhathi seholide kuyilungelo elidingeka kakhulu, lapho ufuna ubumfihlo bakho. Imibhede ingasetshenziswa njengombhede ophindwe kabili noma njengemibhede emibili ehlukene. Izindlu zangasese ezimbili zilula uhambo lapho uhamba neqembu elikhulu. Ikhishi lifakwe kahle ngezinto ezisetshenziswayo ezintsha futhi ungakwazi ukumisa itafula ngezitsha ezinhle kakhulu nezinto zokusika ezingatholakala efulethini. Kukhona nesauna yendabuko yaseFinnish efulethini. Awudingi ukupakisha ikhabethe lakho lonke ohambweni njengoba kukhona iwasha nesomisi efulethini. Ngemuva kosuku oluhle ku-Levi ungaziphatha ngokuhlwa okuphumuzayo esihlalweni esinyakazayo, ubheke eziko.
Uma uhamba nezingane ezincane ungacela izinsiza ezengeziwe mahhala. Umbhede wokuvakasha (+ umatilasi, umcamelo nengubo yokulala), umbhede owengeziwe ogcwele umoya (+umcamelo nengubo), isitulo esiphakeme, ibhodwe, umata wokunakekela izingane kanye nesilawuli esiguqulekayo. Futhi isihlalo semoto yengane siyatholakala (9-18 kg). Kukhona njalo izitsha nezinto zokusika zezingane ezincane, kanye namathoyizi.
Sifuna nokwamukela izilwane ezifuywayo. Sikucela nje ukuthi usazise kusengaphambili ekubhukheni uma uhamba nezilwane ezifuywayo.
Ungakwazi ukugcina ama-skis akho nezinye izingubo zokushushuluza endaweni yokugcina ekhiyiwe ngaphandle kwefulethi eduze komnyango wangaphambili. Ibhentshi lokugcoba i-ski kanye nensimbi yokugcoba ingatholakala ekamelweni lokugcina.
IPalSal Levi itholakala kumfelandawonye wezindlu eziwumugqa obizwa nge-Kätkäläinen.
Siyakwamukela ukuze ujabulele futhi uphumule!
**** Amaphasi amabili (2) we-Ski Buss afakiwe lapho uhlala khona. Izingane ezingaphansi kweminyaka engu-6 zihamba mahhala nomuntu omdala. ****
*** Intengo yendawo yokuhlala ihlanganisa ikhadi elilodwa lokuqeqeshwa eliya ku-Levi Wellness Club ngesikhathi uhlala. Kokubili ukuzivocavoca kwejimu neqembu kufakiwe. ***
I-HDTV engu-50" ene- Apple TV, I-Netflix
4.87 · 117 okushiwo abanye
Levi Centre 400 m, Isuphamakethe 300 m, Levi Spa 400 m, Isitolo sotshwala Alko 600 m, Bar Ihku 400 m, Hullu Poro (Crazy Reindeer) Arena 800 m, Ukuqashwa kwe-Snow mobile 100 m, Levi Travel agency 200 m, Ski 60 ukuthambekela m, i-Nordic country skiing trail 100 m, Snow umzila weselula 100 m.
Angihlali kwa-Levi, kodwa ungangithinta ngocingo noma nge-imeyili. Uma udinga usizo kwa-Levi, inkampani yokuphatha/yokunakekela ingasiza 24/7.
UOlli Ungumbungazi ovelele
Izilimi: English, Suomi
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$528.
Hlola ezinye izinketho ezise- Kittilä namaphethelo